Borigadin’i Talatamaty ny talata 18 jona teo ilay olona voarohirohy, araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena eo amin’ny toby Andrefanambohijanahary . Ramatoa iray sahabo ho 65 taona izy io. “Eo am-panatanterahana ny fanadihadiana tanteraka izahay amin’izao fotoana izao. Alefa hiakatra fampanoavana amin’ny fotoana mahamety azy rehefa vita famotorana. Ny vaovao azo ampitaina hatreto dia mbola miverina manao fanadihadiana lalina any ifotony izahay. Ilay ramatoa kosa dia avy ety akaikin’ny toerana nitrangan’ny fahaverezana sy nahitana ny razana ihany”, hoy ny zandary avy eo anivon’ny Borigadin’i Talatamaty, raha nitafa manokana tamin’ny mpanao gazetinay. Raha tsiahivina, ny alatsinainy 10 jona maraina tokony ho tamin’ny 9 ora no hita i Ny Avo. Tao amin’ny reniranon’Andriantany, Ankadivory Talatamaty no nahitana ilay vatana mangatsiaka, araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena eny an-toerana. Tsahivina hatrany, araka ny fampitam-baovaon’ny zandary izay nohamafisin’ny sekoly izay nianarany fa ny talata 4 jona sahabo tamin’ny 12 ora sy sasany mahery atoandro no nanomboka tsy hita ilay zaza izay nonina teo Morondava Ambohibao, kaominina Antehiroka.